Wafdiga DKMG ah oo lagu eedeeyay kala qobqob & Tafaraaruq ay ka wadaan Hiiraan – SBC
Wafdiga DKMG ah oo lagu eedeeyay kala qobqob & Tafaraaruq ay ka wadaan Hiiraan
Saraakiil sar sare oo ka tirsan Maamulka Dooxada Shabeele oo ku sugan gobolkaasi Hiiraan ayaa eedeymo u jeediyay Wafdi ka socday Dowlada KMG ah oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa xarunta gobolkasi ee Baladweyne.
Eedeynta ay u soo jediyeen saraakiishaasi wafdiga dowlada KMG ah ayaa ku saleysan arinta ay u joogaan gobolka ee ah sidii maamul loo dhanyahay loogu dhisi lahaa gobolka, iyagoona sheegay in ay wadaan kala qobqob iyo tafaraaruq kaas oo ay ku wadaan bulshada gobolka iyo maamulkooda.
C/wali Xasan jimcaale Agaasimaha warfaafinta Maamulka Dooxada Shabeele ayaa wareysi uu siiyay SBC International ku sheegay in tan iyo intii ay gobolka soogaareen Wafdiga isugu jira Wasiirada iyo xildhibaanada ee DKMG ah aysan wax dan ah u qaban aan aheyn kala qob qob ay dadka iyo maamulka ku wadaan.
Waxaa uu intaasi raaciyay Mr C/wali Cowke in ka maamul ahaan ay u jeedinayaan Cambaareyn uguna baaqayaan in ay ka dhexbaxaan dadka iyo maamulkooda maadaama reer Hiiraan gaar ahan Baladweyne ay maamulkooda iyagu soo doorteen, taageersanyihiina.
Maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa soo baxayay Hadalo is qilaadsan oo ka soo kala baxaya maamulada kusugan gobolka iyo Wafdiga dowlada KMG ah, iyadoona maalmo ka hor la shaaciyay kulamo dhinacyo badan oo ay ku wada qaateen Baladweyne Wafdiga DKMG ah iyo Waxgaradka iyo maaamulka gobolka ay ku soo dhamaadeen is afgarad.